राम्रो आशा को केप सायद अफ्रीका को सबै भन्दा प्रसिद्ध केप छ। को कहाँ छ राम्रो आशा को केप? को केप प्रायद्वीप मा दक्षिण अफ्रीका को गणतन्त्र, र थप विशेष इलाका, मा।
शब्दहरू कसम को एक धेरै तिनीहरूलाई लागि यो godforsaken ठाउँ सम्बोधन गर्न नाभिकहरु द्वारा भने थिए। इतिहास धेरै नेविगेटर र अन्वेषकहरूको अत्यधिक प्रयासमा seafaring को कथा भन्छ, तिनीहरूले केप गोलाई, समुद्र धाराहरु हटाउन बनाउन थियो।
कसले राम्रो आशा को केप पत्ता? यो प्रश्न unequivocally छैन जवाफ गर्न सकिन्छ। अब, ऐतिहासिक स्रोतहरू को जानकारी आधारित, हामी निर्धक्क भई पहिलो स्थानमा अझै पनि ईसापूर्व 500 मा भ्रमण पुरातन मिश्र बासिन्दाहरू छ भनेर भन्न सकिन्छ।
समुद्र अभियान मिश्रीहरूले
यो जो आर्थिक स्थिरता गर्न आफ्नो शक्ति पुनर्स्थापना गर्न तत्पर फिरऊनले Necho द्वितीय, को शासनकालमा भयो। यो युरोप मिश्रको उत्पादनहरु ल्याउन एक तरिका फेला पार्न आवश्यक थियो, कि वैकल्पिक समाधान खोज्न छ। डेलिगेसन भाडामा Phoenicians अफ्रीका को पूर्वी पक्ष पनि अन्वेषकहरूको workarounds पाउन आशा जहाँ पठाइयो। यो यात्रा को रिजर्व यस्तो लामो अवधि लागि डिजाइन थिएनन् किनभने, तीन वर्षसम्म ढिला भएको थियो, र धेरै पटक Phoenicians द्वारा खाद्य केही बढ्न पृथ्वी गिर, यो अवरोध। यो अफ्रीका विस्तार भएको थियो। राम्रो आशा को केप र निश्चित अवतरण को ठाउँ, र त्यसपछि यात्री यसलाई skirted। Phoenicians निरुत्साहित फिर्ता मा उनि एक दिन "सूर्य अचानक, उत्तरका पक्षमा देखियो" भनेर त्यसैले, तिनीहरूले भूमध्यरेखा क्रस तथ्यलाई द्वारा स्तब्ध थिए भनियो।
काम अनुसन्धान वैकल्पिक समाधान असफल छ, र थप यात्रा कारगर थिएनन्। व्यय राजस्व बढ्यो, र थप दुई हजार वर्ष भन्दा, कुनै एक यहाँ पौडी खेल्न कुनै प्रयास गरे।
Bartolomeu Dias: राम्रो आशा को केप पत्ता गर्ने एक
को XV शताब्दीको अन्त मा, धेरै धनी यूरोप टाढा-टाढाका भारत बाट राम्रो र महंगा लक्जरी सामान लागि कुनै पनि पैसा तिर्न तयार थिए। तर, यो, विशाल मुसलमान मुलुकमा बाटो अवरुद्ध छ मुहम्मद को शिक्षा अनुयायी युरोप संग सम्बन्ध र व्यापार सम्बन्ध को normalization सुधार गर्न प्रयास गरे रूपमा। समुद्र - त्यसैले, यो अन्य तरिका हेर्न आवश्यक थियो।
फेला पार्न पहिलो प्रयास यो पोर्चुगिज लिए। पोर्चुगल राजा, यूहन्ना द्वितीय हात्ती गर्न वैकल्पिक समाधान को खोज मा एक यात्रा पठाए। जो, tenacity र धीरज अझै राम्रो आशा को केप आफ्नो टोलीसँग रवाना संग यात्रा को टाउको मा थियो Bartolomeu Dias। तर कसरी कठिन! Hellish पाठ्यक्रम, को निवासी को वैमनस्यता। आफ्नो टोली सदस्य जहाज धेरै पटक मा mutiny उठायो। किनभने तिनीहरू सबै भन्दा भारत बाटो खोज्न आशा गुमाएका तिनीहरूले घर फर्कने माग। Bartolomeo Dias सहित "राम्रो आशा को केप कहाँ छ?" प्रश्न नाभिकहरु टोली एक, गर्न, उत्तर दिन सकेन। तिनीहरूले यसलाई पौडी खेल्न पहिलो मान्छे थिए भएकोले महादेशमा आफ्नो सही स्थान सापेक्ष तिनीहरूले थाहा सकेन। र नाम उहाँले त्यहाँ थिएन। त्यसपछि बी Dias, यो "तूफान को केप" भनिने ठाउँमा तिनीहरूलाई हुनेछ जो सास्ती को छाप अन्तर्गत। त्यसैले राम्रो आशा को केप को खोज थियो। वर्ष घटना भयो जसमा (1488), यस रहस्यमय र असामान्य स्थान को इतिहास को शुरुवात चिन्ह लगाइयो।
को पोर्चुगिज नेविगेटर को फिर्ती
असंतोष अर्को वृद्धि Dias आदेश को यात्रा फिर्ता गरिएका भन्ने तथ्यलाई गर्न पुगे। नाभिकहरु ठाडै तिनीहरूलाई अनन्त देखिन्थ्यो जो यात्रा जारी गर्न इन्कार गरे छन्। तिनीहरूले बिन्दु त्यो तिनीहरूलाई विरुद्ध तत्व थिए र धेरै आँधीबेहरी पठाउँछ भने, पूर्व गर्न थप जाने प्रयास मा देख्नुहुन्न। तर, त्यो भारतीय नाभिकहरु को तट पुगेको छैन भन्ने तथ्यलाई बावजुद, Korol Zhuan द्वितीय को यात्रा को परिणाम संग, "अन्वेषण" सफल मानिन्छ खुसी थियो। मात्र कुरा उहाँले मन थिएन - डरलाग्दो शिर्षक केप Bartolomeu Dias दिनुभएको। यो भारत बाटो मा मुख्य अवरोध र उनको आउँदै को पहिलो कदम हो - राजाले केप को केप कि यात्री प्रेरित गर्नेछ भन्ने एक फरक नाम चाहिन्छ भनेर लाग्यो। त्यसैले तिनले ठाउँ नाम दिए "राम्रो आशा को केप।" भौगोलिकसमकक्ष: अक्षांश: -34,358056; देशान्तर: 18.471944
यात्रा वास्को दा गामा
केही वर्षपछि अर्को पोर्चुगिज, वास्को दा गामा पहिलो पहिलो भ्रमण बाट रवाना र आफ्नो logbook मा एक संवाददाता टिप्पणी गरे। उहाँले लामो र सिपालु Maneuvers को परिणाम रूपमा आफ्नो जहाज राम्रो आशा को केप पारित भनेर लेखे। गीत नाम साँच्चै भाग्य पोर्चुगिज गर्न प्रमुख थियो। वास्को दा गामा द्वारा राम्रो आशा को केप को खोज 1497 मिति दिएको छ। रूपमा आफ्नो फिर्ती मा राजा रिपोर्ट यस नेभिगेटर, भारत को किनारा पुगेको छ। त्यसैले, वास्को दा गामा आफ्नो यात्राको मुख्य उद्देश्य पूरा गर्नुभयो। दक्षिण अफ्रीका को क्षेत्र को एक विकास, यो थिएन।
एक ट्रान्जिट बिन्दु समुद्री मार्ग रूपमा डच द्वारा राम्रो आशा को केप को खोज
केप टाउन को बंदरगाह शहर को आधार (को अंग्रेजी देखि। "एक promontory सिटी") डच एक क्रेडिट छ। तिनीहरूले रोट्टरड्याम र भारत बीच पहिलो स्थानान्तरण बिन्दु रूपमा राम्रो आशा को केप खोज। यो विरामीहरु र खाना र पानी डच पूर्व भारत स्टक को आपूर्ति जहाज व्यवहार भनेर यहाँ छ। स्थानीय जनसंख्या शुरू निवासी एक अतिथि प्राप्त गर्न स्वागत गरे। तर XVII सताब्दी, यूरोप तीव्र निराशा केप टाउन गर्न थाल्दा को लेट 60-एँ मा, तिनीहरूका भूमि र आफ्नो enslavement देखि निवासी crowding थाले। यो आधारमा लामो र रक्तपातपूर्ण संघर्ष को शुरुवात।
को केप भन्दा विवाद
ब्रिटिश केप टाउन स्थापित गर्ने राम्रो आशा, को केप पत्ता जो थाह थियो। तर यो तिनीहरूलाई डच दक्षिण अफ्रीका देखि 1795 मा दूर रोक्न थिएन। अब, यो क्षेत्र रूपमा चिनिन थाले "राम्रो आशा को केप को उपनिवेश प्रान्त।" को Boers, जो डच हालतमा देखि "किसान" अनुवाद - जनसंख्या बीच पहिलो settlers को सन्तानहरू थिए। नयाँ आदेश बलियो dissatisfaction कारण छ, र त्यसपछि तिनीहरूले Zulus यसको बाटो प्रतिरोध मा भंग गर्दै छन्, महाद्वीप को उत्तर सारियो।
उपनिवेश नियम बाट मुक्ति
को XIX सताब्दी को अन्त सम्म Boers अलग बस्ने, र तिनीहरूलाई द्वारा Inhabited इलाका अनौपचारिक नाम प्राप्त "बोअर गणराज्यहरु।" तर यी मुलुकमा हीरे र सुनको ठूलो जम्मा हुन्छन् फेला पारेका थियो, ब्रिटिश फेरि ध्यान विद्रोही Boers गर्न आकर्षित। 1899 देखि 1902 को क्रूर एंग्लो-बोअर युद्ध, बेलायत परिणाम जो अझै बोअर गणराज्यहरु इलाका महारत जारी राखे। अब दक्षिण अफ्रीका (राम्रो आशा को केप साथै) को सम्पूर्ण ब्रिटिश प्रभुत्व थियो।
केवल आधा भन्दा बढी एक सताब्दी पछि, 1961 मा, उपनिवेश निर्भरता को लामो अवधि पूरा भएको थियो। दक्षिण अफ्रिका: अहिले यो क्षेत्र रूपमा निम्नानुसार भनिन्छ।
फ्लाइंग Dutchman को पौराणिक कथा
लिजेन्ड - राम्रो आशा को केप सबैभन्दा चाखलाग्दा र चिरपरिचित कथा। उनको ठूलो विविधता मा बदलाव। कहिलेकाहीं यो मा मुख्य वर्ण को नाम फरक छन्, तर कुनै पनि मामला मा कहानी, एउटै अर्थ छ। एक डच जहाज को कप्तान श्राप थियो जहाँ यो छ। आफ्नो प्रतिष्ठा, यो सौम्य राख्न, छैन धेरै राम्रो थियो। उहाँले गाली र blasphemous लागि प्रतिष्ठा थियो। आफ्नो नाम कप्तान भ्यान Stratten थियो। आफ्नो हात मा सधैं मामला मा कसैले सजिला आउँछ, अन्त्यमा नेतृत्व पट्टिका संग ह्विप थियो। फिर्ता धेरै नाभिकहरु स्थायी रूपमा सचेतक को जंगली पिटाइ देखि scarred। भ्यान Stratten जहाज अक्सर गर्ने तरिकामा दर्जनौं मृत्यु अफ्रिकी दासहरू ओसारपसार। मृत शरीर सामान्यतया overboard फ्याँकिन्छन्। यो सार्क कप्तान नजिकै सँगैको जहाज अर्को "sop" को लागि प्रतीक्षा थिए किन छ। राम्रो-खुवाउनुभयो र खुसी, तिनीहरूले उपस्थिति क्रूर कप्तान संग खुसी थिए, त्यो तिनीहरूलाई मजाक उल्लेख "मेरो सानो माछा।" एक भारी आँधी मा समातिए को क्रूज जहाज मध्ये। तिनीहरूले राम्रो आशा को केप राउण्ड जस्तै भएको निर्देशांक यो असम्भव थियो यो खराब मौसम मा केहि हेर्न किनभने, ठ्याक्कै कि देखाइयो। सबै नाभिकहरु उर्लंदो तत्व बाहिर सवारी गर्न फिर्ता बारी कप्तान बिन्ती गरे।
यो कठिन भ्यान Stratten फोहर श्राप प्रतिक्रिया कि अनुमान छ। उहाँले भन्नुभयो: "कुनै बाटो! म अझै पनि पौडी खेल्न! म संसारको अन्त पनि दिन छैन अप। म पनि राक्षस को प्राण दिन, तर यो आँधी बाँच्न हुनेछ। " यो स्वर्गको ढोकाहरू खोल्न र परमेश्वरको आवाज सुनेको क्षण थियो: "तपाईं पौडी खेल्न अब भने छ!"। शैतानको कप्तान गरेको प्राण लिए। त्यतिबेलादेखि केप को तट बन्द restlessly र निराशा जहाज भ्यान Stratten बहने। सबै नाभिकहरु र कप्तान आफैले foul-mouthed अब waterways अनन्त जीवन, अमरता गर्न, भूमि गर्न सक्षम नभइकन बर्बाद छ। अन्य जहाज बैठक, अमर अन्वेषकहरूको लामो मरेको छ जो आफ्नो नातेदार, पत्र डेलिभर गर्न सक्दो प्रयास गर्छन्। धेरै खराब Omen - यी अक्षरहरू लिनुहोस्। तपाईं यो भने, श्राप दयालु सहायक जान्छ।
सबै भन्दा प्रसिद्ध स्थलहरू मध्ये एक जसको नाम केप को नाम मेल खान्छ राष्ट्रिय आरक्षित, मानिन्छ। यो तालिका पहाड ( "तालिका पहाड" राष्ट्रिय निकुञ्ज) को भाग हो।
चश्मा वा Blackfeet भनिन्छ जो पेंगुइन, दुर्लभ प्रजातिका बस्ती; chacma बादर बस्ती चक्मा।
भौगोलिक वस्तुहरु को सबै भन्दा भ्रमण केप Agulhas, कर्मचारी पहिचान अफ्रीका को दक्षिणी टिप को चिनारी हो।
दक्षिण अफ्रिकी Astronomical वेधशाला; केप टाउन, जहाँ तपाईं वी र एक Waterfront, दुई समुद्रहरू मछलीघर भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ को बंदरगाह शहर; Kirstenbosch वनस्पति उद्यान, 1913 मा स्थापित। राम्रो आशा को Manor महल दक्षिण अफ्रीका मा सबै भन्दा पुराना भवन छ; दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रिय ग्यालरी।
यी स्थानहरू राम्रो आशा को प्रसिद्ध केप। तिनीहरूलाई केही फोटोहरू तल दिइएका छन्।
मानव आशा को personification रूपमा राम्रो आशा को केप
केप साँच्चै उत्साहजनक नाम। र आफ्नो समस्याहरूको र misfortunes लागि निराशाजनक छन् पनि मान्छे, यो रहस्यमय ठाउँमा भएको भएको सर्वश्रेष्ठ विश्वास गर्न सुरु गर्नुहोस्। राम्रो आशा को केप एक मार्गदर्शक ज्योति हुन्छ, र यो मा भएकाहरूलाई मान्छे कहिल्यै भएको छ लागि, आफ्नो नाम बिरामी छोराछोरीको जीवन रोशन।
राम्रो आशा, डीएम को केप - सबै दुनिया भर आमाबाबुले एक समुदाय, बच्चाहरु पीडित हो सिंड्रोम तल। तिनीहरूले प्रत्येक अन्य आशा दिने, स्वास्थ्य र छोराछोरीलाई पूर्ण जीवन को लागि लडाई मा एकताबद्ध छन्।
त्यसैले, "कसले राम्रो आशा को केप पत्ता" को प्रश्नको जवाफ पनि छ को पोर्चुगिज को नाम अन्वेषक Bartolomeu Dias, पहिलो यो साँच्चै जादुई स्थानको भूमि मा खुट्टा सेट गर्ने। यसलाई उनी र उनको तीन साना जहाज पहिलो पटक लागि केप राउण्ड थियो। अब मिथक, तेजस्वी प्राकृतिक आकर्षण धेरै र राम्रो आशा को केप पर्यटक धेरै आकर्षित।
एक ठाउँ जहाँ सूर्य सेट
वाष्पीकरण - ... प्रक्रिया एक एक तरल अवस्थाबाट एक पदार्थ को चरण एक वाष्प गर्न संक्रमण छ
अन्टार्कटिका मा ताल वोस्तोक। अन्टार्कटिका मा सबै भन्दा ठूलो subglacial ताल
उत्तर अमेरिका - यो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिको छ
जानकारी वस्तु: परिभाषा, प्रकार र विशेषताहरु
यस सिद्धान्त बारे उपदेश: विद्यार्थीहरूको लागि लोक बुद्धि
Sinusitis: लक्षण र रोग को उपचार
Chanterelles कहाँ बढ्न र कसरी यी अद्भुत मशरूम संकलन गर्न?
रङ्ग balms र बाल लागि शैंपू: एजेन्ट रङ लगाउन
मेरो पहिलो पाक अनुभव: कन्डिसन दूधको लागि एक नुस्खा
औषधि "Metiluratsil": प्रयोगको लागि निर्देशन
Reperskie टोपी - rappers को पहिचान
बैगुन-खुट्टे कीमा बनाएको मासु संग